Win big nge Starmania uma une izigidi izinkanyezi elinde wena spin. Lokhu amazing slot machine ine isihloko agqamile ekhazimulayo engaphakathi izinkanyezi eziyokwenza ube ukuthandana nalo. Singasho kuphela baphupha ekufinyeleleni izinkanyezi, kodwa lo mdlalo kuletha zona, ezikrinini zakho kuphela ku Top Slot. Uma kukhona umuntu ojabulela ubuhle besibhakabhaka ebusuku, ke lo mdlalo ohloselwe nina +. Akukona nje kuphela ukuthi ihluzo yalesi game enhle, futhi unalo eliphezulu ukubuya izinga kuka 95%!
Uma ucabanga inhlanhla yakho esivuna yakho, bese uyazama it on ukuphotha lapha! Beka ukubheja wakho ibhajethi yakho bese ake fortune bakho bakhulume uqobo. Uma uthola inhlanganisela izinkanyezi ezintathu noma ngaphezulu, kungcono win. Kodwa lokhu kumane nje win eyisisekelo. kulesi 5 itolitji futhi 3 imigqa game, fortune yakho kusezandleni of 6 izinkanyezi akhishwa imisebe yalo. Kodwa kuyinto endle futhi osakaza ukuthi babe izinto zibe ngcono esitolo ngawe.
Izinkanyezi embule fortune yakho emihle at Starmania!
Umdlali kungaba ukugembula noma yini kusukela 0.10 ukuze 20.00 credits. nge 10 paylines kuzo zonke, the ambikele abhekwa njengamagama zombili izindlela - kwesokunxele kuya kwesokudla kanye kwesokudla kuya kwesokunxele. Jackpot Yilapho-ke 5 izinkanyezi big red kukhona on the slot in inhlanganisela lokuwina, enikeza whooping 500 izikhathi ukubheja. Ngisho nangemva ukuthi, isidlali bangakhetha ukuba ukugembula win.
Niyolazi izinkanyezi zakho lucky lapha!
Uphawu zasendle liyavela reels 2, 3 futhi 4 kuphela, futhi kungaba ithathe zonke izinkanyezi ngaphandle netshwayo chitha. Uphawu chitha iwuphawu nomvuzo omkhulu of the game. With okuningi njengoba 200 Izikhathi of ukubheja yakho ukuba ukunqoba, futhi kunikeza out 10 osebenzisa free. Futhi for zonke spin khulula, kukhona sasendle is abaya. Kafushane, Ngokuphathelene nobungako to win big uthola ephakeme kuphela.
It is esigama Star-ukuhahela isizathu! Kunikezelwa kubo bonke zokugembula-zingadedeli, lo mdlalo ungomunye the ambalwa slot machines ukuthi kugcina kujwayeleka kakhulu. Easy ukudlala futhi baqonde, azikho eziyinkimbinkimbi bonus emahlandla kule eyodwa. Isihloko uhlukile futhi iso-ekubambeni, akukho bayekelele ukuzijabulisa, futhi abadlali kuphela shiya acebile nebajama ukuphotha ku Starmania!